SCIENCE TO SOCIETY: बन्द् कीर्तिपुर
बिगत केहि हप्ता देखिको नेपाल बसाईको क्रम मा यो तेस्रो दिनको बन्द हो मेरो लागि। यो तिन दिने बन्द कीर्तिपुरमा मनाइन्छ। बिहान बेलुका चिसो छ। दिनभरि मजाको पारिलो घाम लगेको छ।
माओबादीले नागरिक सर्बोचत्ताको लागी गरेको यो तिन दिने बन्दले उसको माग पुरा हुने छाट त छैन। के गरे वा भए पछि नागरिक सर्बोचत्ता कायम हुन्छ? धेरैको बुझाईमा यो माग पुरा हुने भनेको अहिलेको सरकार ढलेर माओबादी कामरेडहरु सत्तामा पुगे पछि हो। सत्ता भन्ने कुरो कसैले पाए पछि सितिमिति कहा छोड्छ र?
तपाइलाई कस्तो लाग्छ? माओबादीको यो माग र नेपाल बन्दको औचित्यता कति होला?
दूर्जेय चेतना December 20, 2009 at 4:19 PM
lau, kirtipur dekhna payeyo dhari lamo samaya pachi. tapai lai dhari dhari dhanyabaat. Nepal basai ramro hos.
Aakar December 20, 2009 at 6:49 PM
हामी सित जय बन्द र जय होस् बन्द गर्ने को भन्नु बाहेक अरु विकल्प छैन !
N K M December 21, 2009 at 5:02 AM
Nepalean January 1, 2010 at 8:22 PM
बन्दको त के कुर गराइ भो र, एक जना मित्रले नेपालबन्द.कम नै खोलेका छन। त्यसमा गएर हेर्ने हो भने बन्दको जात्रा मज्जाले हेर्न पाइन्छ। सुरू सुरुमा नेपाल बन्दा हुंदा त बिदा भए जस्तै लाग्थ्यो। अब भने दिक्कै लाग्ला? कहिले कांही आउने भए पो, सधै आउंछ यो बन्द।
साथै गिरी जी तपाइलाइ नया बर्षको हार्दीक शुभकामना।